DEG DEG: Fadeexad Weyn oo soo wajahday isku Aadka Champions League kadib markii lasii ogaadey qaabka laysugu dhici doono Semifinalkiisa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
DEG DEG: Fadeexad Weyn oo soo wajahday isku Aadka Champions League kadib markii lasii ogaadey qaabka laysugu dhici doono Semifinalkiisa
(13-4-2018) Waxaa soo baxday fadeexad weyn oo ku Saabsab qaabka isku aadka koobka Champions League kadib lasii ogaadey qaabka laysugu dhici doono Wareega Semifinalka koobkaas oo Jimcihii lasameeyey.
Waxaa lahelay Warqad kooxda Roma u dirtay Liverpool kahor intii aan Jimcihii lasamayn isku Aadka Warqadaas oo ahayd qaabka loo iibin doono Tigidhada kulamada labada kooxood waxaana lagu baahiyey Warqadaas fadeexada Xanbaarsan baraha bulshada.
Warqada kooxda Roma u dirtay Liverpool ayaa ahayd mida iibinta Tigidhada Xili Cayaareedka waxaana ku qoraa in 2 da bisha May uu dhici doono kulanka lugta labaad ee Liverpool booqan doonto Garoonka Roma.
Lama oga sida kooxda Roma ku ogaatey in ay ku dhici doonaan Liverpool kamana hadlin Xiriirka fadeexadaan lakulmay ee UEFA balse dadweynaha caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sheekadaan kuwaas oo intooda badan kutilmaamay in ay tahay Fadeexad banaanka u soo baxday.
Waxaa jirey eedeymo fara badan oo horay loogu soo jeediyey qaabka isku Aadka koobka Champions League horay wargeyska AS ayaa soo bandhigay shaki weyn oo ku saabsan qaabka laysugu aadiyo kooxaha yurub sidoo kale daaficii hore ee kooxda Real Madrid Roberto Carlos ayaa shaaciyey in qaabka loo sameeyo isku Aadka Wareega Gruubyada koobka Champions League in uu kajiro musuq maasuq ba an.